Concorde Crashes FSX SE2ပတ်2days ago #1878
Concorde ကို Rikoooo မှမကြာသေးမီကကူးယူပြီး၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ။ က crashing အပေါ်စောင့်ရှောက် FSX SE ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကူညီနိုင်
Concorde Crashes FSX SE6ရက်ပတ်လုံး4နာရီအကြာက #1887
Concorde Crashes FSX SE5ရက်ပတ်လုံး 11 နာရီအကြာက #1888
ပထမ ဦး ဆုံးဖွင့်သောအခါ gauge အသစ်များကိုလက်ခံခဲ့ပါသလား။ ငါများသောအားဖြင့် CTD ဖြစ်ပေါ်စေသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရှာပါ addon လေယာဉ်ပျံ
Concorde Crashes FSX SE5ရက်ပတ်လုံး7နာရီအကြာက #1890
Concorde Crashes FSX SE5ရက်ပတ်လုံး3နာရီအကြာက #1891
ဒီအများကြီးနှင့်အတူဖြစ်ပျက်လျှင် addons, I have two questions for you:
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် ricardo.placido.
Concorde Crashes FSX SE 8 နာရီ7မိနစ်အကြာက #1903
သွားပါ fsx.cfg and delete any entries for concorde gauges etc then see if it loads ok - ignore all messages to re-allow the gauges. I often foundacertain full dump gauge causes issues with 3rd party addon aircraft in FSX
0.350 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်